သခင့်ရွှေပြည်သစ် - ယုဒသန်အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်း Nov2011
စင်ကာပူ၊ ယုဒသန်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှ JBCWF အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်း သခင့်ရွှေပြည်သစ် ထွက်လာပါသည်။ အသင်းတော်မှ စာပေစိတ်ဝင်စားသူများ ရေးသား၊ဝေငှ၊ထုတ်ဝေပါသည်။ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ မင်းအောင်သက်လွင်ဖြစ်ပြီး၊ သင်းအုပ် ဆရာသြဂတ်စတတ်မှ အမှာစာ "သခင့်ရွှေပြည်သစ်" ကျမ်းပိုဒ်များဖြင့် အစပြုပါသည်။
Read more: သခင့်ရွှေပြည်သစ် - ယုဒသန်အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်း Nov2011
ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြုစာစောင် - နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁
စိုက်သည့်အတိုင်း ရိတ်ရလိမ့်မည် - ညီအစ်ကိုကြီးဦးးတင်မောင်ထွန်း
ဘုရားသခင်၏ခေါ်တော်မူခြင်း - ညီအစ်ကိုဦးကပ်ခန့်ခုပ်
ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်တောင်းလျှောက်ပါ - ညီအစ်ကိုကြီးဦးတင်မောင်ညို
ယေရှုခရစ်၌ရှိသောစိတ်သဘော - ဆရာဦးအောင်သက်ညွန့်
Read more: ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြုစာစောင် - နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၁
သခင့်စကား-၁၂၃ နှင့် အတွေ့အကြုံ - မင်းအောင်သက်လွင်
သူနာပြု ကျောင်းဆင်းကာစ၊ လူငယ်လေး တစ်သိုက် ကျွန်တော့် ယောက္ခမ
အိမ်ကို ရောက်လာ ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ စင်ကာပူကနေ အင်းစိန် အိမ်ကို ခနအလည်
ပြန်လာခိုက်၊ အဝေရာ လမ်းက ယောက္ခထီး အိမ် မှာ မိန်းမနဲ့ ကလေးကို လာပြန်
ခေါ်နေတုံး လူငယ်လေး တွေနဲ့ ယောက္ခထီးတို့ ပြောနေ တဲ့စကားကို မသိမသာ
Read more: သခင့်စကား-၁၂၃ နှင့် အတွေ့အကြုံ - မင်းအောင်သက်လွင်
အဘယ်ကြောင့် ဘုရားသည် လူကိုဖန်ဆင်းသနည်း (မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာအုပ်)
လူအဖြစ် အသက်ရှင်ခြင်းထဲစတင်သည်နှင့် အဘယ်သို.သောသူဖြစ်ပါစေ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် အဘယ်ကြောင့်အသက်ရှင်နေရသနည်းဆိုသည့် မေးခွန်း၏အဖြေကို တိကျစွာနားလည်ကြရမည်။ ဤ အကြောင်းအရာသည် ဘာသာတရားမဟုတ်ပါ။ ပိုင်ရှင်၏တရားအကြောင်း ဖြစ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ သူ.ဖါသာသူဖြစ်ပေါ်လာသောလူနှင့်အရာဝထ္တုများဟူ၍ လုံးဝမရှိပေ။
Read more: အဘယ်ကြောင့် ဘုရားသည် လူကိုဖန်ဆင်းသနည်း...
အမှုတော်ကို မြန်မာပြည်၊ လားရှိုးမြို့ မြန်မာဖိလဒေလဖိ (ပင်တေကုတ်တေ)အသင်းတော်တွင် ထမ်းရွက်နေပါသည်။ Why did God create man? ဆိုသည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးသားထုတ်ဝေထားပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ဖြူးပါသည်။ ၀ဘ်ဆိုဒ် လိပ်စာမှ
Read more: စာအုပ်ကြော်ငြာ်ခြင်း - Why did God create man?
မင်းအောင်သက်လွင် - ရေးသားစီစဉ်ထုတ်ဝေသောမီနီမဂ္ဂဇင်း၊ အစေခံလမ်းမှ
လောကမှာ ရွှေလမ်း၊ ငွေလမ်း၊ ပန်းခင်းလမ်း - ဆိုတဲ့ လမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင်အစေကို ခံလိုသူတွေအတွက်တော့ အစေခံလမ်းမှတစ်ပါး အခြားလမ်းမရှိပါ။ အစေခံလမ်းဆိုတာ သခင်ကိုယ်တော်တိုင် လျှောက်ခဲ့သောလမ်း၊ သခင့်ကို ချစ်သောသူများ လျှောက်ခဲ့သောလမ်း၊ သခင့်ကို အစေခံလိုသူများ လျှောက်ရမဲ့ လမ်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Read more: မင်းအောင်သက်လွင် -...
အင်္ဂလိပ် မက်သဒစ်မစ်ရှင်ဆရာကြီး (၁၈၃၂-၁၉၀၅) သည် တရုပ်ပြည် CIM China Inland Mission စတင်လုပ်ဆောင်သူဖြစ်ပြီး၊ အသက်ရှင်စဉ်ကာလတွင် အသင်းတော်ပေါင်းများစွာကို ပြုစုပျိုးထောင်၊ လုပ်ဆောင်ခဲ့သူ သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်မှ ဘီလီဂရေဟန်ရေးသားသော စာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာပြန်ထားသော စာမျက်နှာ ၃၃၆
Read more: တရုပ်ပြည် သာသာနာပြု၊ အင်္ဂလိပ်ဆရာ ဟဒ်ဆင်တေလာ
၂၀၁၁ ဇွန်လတွင် ဆရာကြီးယုဒသန်အကြောင်း ခရစ်ယန်မဟုတ်သော စာရေးဆရာ တင်နိုင်တိုးရေးသည့်စာအုပ်ကို ဦးကျော်လှိုင်၊ စေတနာစာပေမှ ထိုတ်ဝေပြီး၊ တကောင်းစာအုပ်တိုက်မှဖြန့်ချိသည်။ ဂျပ်ဆမ်ဘုရားကျောင်း(ရန်ကုန်) မှ သင်းအုပ်ဆရာတော် ဦးအာသာကိုလေး(Rev, Dr) နှင့် တွဲဖက်သင်းအုပ် ဦးကျော်ညွန့် (Rev.)
Read more: ဆရာယုဒသန် (တင်နိုင်တိုး) စာအုပ် ၂၀၁၁
ဓါတ်ပုံရိုက်ပါက ပြုံးနေရန်သာ များသောအားဖြင့် ပြောကြသည်။ သို့သော် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဒေသအချို့တွင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်ပါက မပြုံးရ ဟု ပေါ်လစီတခု ထုတ်ပြန်ထားသည်။ လိုင်စင်အတု ပြုလုပ်သူများကြောင့် မော်တော်ယာဉ်ဌာနက ဓါတ်ပုံအသစ်နှင့် ကွန်ပြူတာထဲရှိပြီးသား ဓါတ်ပုံကို တူမတူ၊
Read more: နေ့စဉ်ခွန်အား၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို...
Read more: သခင့်စကား ၁၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ ပို့လိုက်ပါတယ်။
ဂေါ့ဒ်ဘလက်စ်ယူလား၊ ဂေါ့ဒ်ဝစ်သ်ယူလား - (မင်းအောင်သက်လွင်)
ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သူ အသိုင်းအဝိုင်း ကြားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ စကားလုံးလေး ရှိပါတယ်။ ယုံကြည်သူ အားလုံးနှစ်သက်တဲ့ စကားလုံးလေး ဖြစ်သလို။ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းအသင်းတော်ထဲမှာ မိုးမွှန် နေအောင် ပြော တဲ့ စကားလုံးကတော့ ̏ဂေါ့ဒ် ဘလက်စ် ယူ ̋ (God bless you) ဖြစ်ပါတယ်။
တီဗီ ထဲမှာ အော်
Read more: ဂေါ့ဒ်ဘလက်စ်ယူလား၊ ဂေါ့ဒ်ဝစ်သ်ယူလား -...
၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် ဖြန့်ဝေသော စင်ကာပူမှစာရေးဆရာမ Lim Min ပြုစုသော ဆရာတန်ကီးအထုပ္ပတိဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် စာမျက်နှာ ၂၀၂ ရှိပြီး၊ ရောင်စုံဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ၁၄ရွက်အပါအ၀င် အဖြူအမဲ၊ မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများစွာပါရှိသည်။ ဆရာတန်ကီး ၂၀၀၆တွင် စင်ကာပူရောက်ရှိချိန် ဆရာမလင်မင်း
Read more: ဆရာတန်ကီး၏ အမှောင်တွင်းမှဘုန်းကျက်သရေအလင်းဆီတို့...